काठमाडौं । आम दर्शकहरुको रोजाईमा रहेको चलचित्र देश खोज्दै जाँदाको चितवनमा विशेष शो गरिने भएको छ । मोफसलकै चर्चित लक्की मिडिया हाउस चितवनले असोज १९ गते नारायणगढको गणेश चित्र मन्दिरमा विशेष शो आयोजना गर...
कसले जित्ला ‘आई लभ यु २’ को १ लाख ?
काठमाडौं । शुभ मिडिया होमको प्रस्तुतीमा काुर्टन्ज क्रुलाई फिचरिङ गरिएको गीत ‘जता जता पिरतीको बाटो’ अहिले चर्चामा रहेको छ । बसन्त सापकोटको संगीत, दिनेश थपलियाको शब्द र सरोज ओलीको स्वरमा रहेको गीत एक मह...
शिला र भविनले लिएर आए दशैँ तिहार आयो गित – (भिडीयो सहित)
विराटनगर । नेपाली सांगीतिक जगतका नेपाली चाडपर्वको महत्वलाई झल्काउदै आफ्नो पिर र वेदनालाई समेटेर बजारमा आफनो नयाँ एलबम आउने क्रम जारी रहेको छ । यस्तै नेपाली हरुको महान पर्वलाई लक्षित गरेर पाल्पाली श्र...
मधुको “हे भगवान हे भगवान सुन” युटुव मार्फत बजारमा सार्वजनिक
विराटनगर । परिनिमार्ण क्रियसन प्रालिको प्रस्तुतीमा गायक मधु परियारको नयाँ लोक दोहोरी एल्बम को हे भगवान हे भगवान सुन युटुुव मार्फत नेपाली सांगितिक बजारमा आइपरेको छ । मायामा विछोड हुदाँ हरेक मानिसले ...
ईटहरी । चर्चीत र्यापर गायक याम बुद्धको सम्झनामा कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यामबुद्ध फाउण्डेसनको आयोजना यमले पहिलो औपचारीक अध्ययन सुरु गरेको सलकपुर स्थित विद्यालय ब्राइट फिचर उच्च माध्यमिक विद...
इन्दिरा जोशिले आफ्नो दिलमा कसलाई सजाइन ? (भिडियो सहित)
एन एच एस मिडियाको प्रस्तुतिमा तृष्णा खड्का को गित र शंकर अधिकारी घायलको संगीत र निर्देशनमा इन्दिरा जोशी को आवाज रहेको दिलमा सजाएको भिडियो सार्वजनिक गरिएकोछ। तृष्णा खड्का ,शेखर अधिकारी को अभिनय मा स...
तीज गीतहरु दिन प्रतिदिन युटुबमा अत्याधिक मात्रामा सार्बजनिक भएका छन, तर दर्शकले यो तीज गीतले बजार पिट्छ है भन्ने खालको गीत अझै सम्म पनि बजारमा सार्बजनिक नभएको अबस्थामा हरि माया रायमाझी , बिष्णु ठडराइ ...
कोमल ओली मन्त्री, शर्मा सल्लाहकार !
पछिल्लो समय राजनीतिमा होमिएकी सञ्चारकर्मी तथा गायिका कोमल ओली तीजको बेलामा आफ्ना गीतकै माध्यमबाट चर्चामा आउने गर्छिन् । पोइल जान पाम्, लास्टै चोटी हो जस्ता गीत गाएर चर्चामा आएकी ओलीले यसपटक ‘चाहिएन पो...
नयाँ ब्वाइफ्रेन्डसँग प्रियंका कार्कीले सार्वजनिकस्थानमा किस गगरेपछिको प्रतिक्रिया
घटना अलि अगाडिको हो । फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल २’को सफलतामा फिल्म युनिटले गरेको कार्यक्रममा प्रियंका अन्डरवेयर देखाएर पत्रकारका अगाडि निर्धक्क बसिन् । पत्रकारले फोटो खिचे । जब त्यो फोटो बाहिर आयो, प्रियंक...
स्थानीय निर्वाचमा एमालेलाई जिताउन यस्तो आयो नयाँ गीत ( भिडियो सहित)
काठमाडौं । दोश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरि गीतकार तथा जनगायक मोतिराज खनालले एमालेलाई जिताउने अभियान अन्तरगत नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । मंगलबार मात्रै बजारमा आएको उक्त गीतमा खनाल र मञ्ज...
काठमाडौं । ठमेल बजार गीत चर्चित भएसँगै एलिशा राईको चर्चा पनि बढेको छ । ठमेल बजार गीतको चर्चाले एलिशा राईको क्रेजलाई ह्वात्तै बढाएको छ । त्यो सँगै एलिशाको व्यस्तता पनि बढेको छ । उनको नयाँ प्रस्तुतीह...